Dokotera radiôna Proton California - Proton California
Ny Oncologists malaza momba ny tontolo
Mpitarika ny indostria.
Mpiaro amin'ny Proton.
Hihaona amin'ny mpitsabo anay
California Protons Cancer Therapy Center mpiara-miasa amin'ireo dokotera tena tsara mba hanomezana fitsaboana tsy manam-paharoa sy fikarakarana fitsaboana ho an'ny marary. Iray amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana tokana roa ao Kalifornia, ary mpamatsy faritra, mpiara-miasa amin'ny California Protons dia miara-miasa amin'ireo dokotera amin'ny rafi-pitsaboana manerana ny fanjakana mba hanomezana ireo mila fitsaboana fitsaboana proton. Ny mpiara-miasa dia misy:
UC San Diego Fahasalamana
Hopitaly Rady Ankizy
Ny mpiara-miasa amin'ny California Protons Cancer Therapy Center dia miara-miasa amin'ny Proton Doctors Professional Corporation (PDPC) mba hanomezana fitsaboana tsy manam-paharoa sy fitsaboana any amin'ireo marary. Miaraka amin'ny traikefa mitentina 50 taona mahery ao amin'ny habakabaka proton, ny mpitsabo PDPC antsika dia nanasitrana marary mihoatra ny 14,000 izay voan'ny fitsaboana proton. Ny ekipanay dia ekena iraisam-pirenena, notadiavin'ny marary avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ary manampahaizana manokana amin'ny fitsaboana fitsaboana kans mahazatra sy tsy fahita firy.
Loha sy hatoka ho an'ny olon-dehibe, Sarcoma, rafi-pitabatabana afovoany (CNS), Prostate, nono
Prostate, Sela, Réloma, Lymphoma
Ny UC San Diego Health dia eo amin'ny laharana nasionaly eo amin'ny sehatry ny fitsaboana sy fanatanjahan-tena enina US News & World Report, ary fonenan'i San Diego tokana an'ny Ivotoerana momba ny homamiadana nasionaly voatendrin'ny San Diego. Nandritra ny am-polony taona maro, ny UC San Diego Health sy ny sekoliny momba ny fitsaboana sy ny fivarotam-panafody dia nandroso fanafody tamin'ny alàlan'ny fahitana torimaso - anisan'izany ny fanaovana mpisava lalana voalohany amin'ny fandidiana, fanaovana an-tsary, fitsaboana homamiadana ary fikarakarana kardia. Ny UC San Diego Health no rafitra fikarakarana ara-pahasalamana mifototra amin'ny oniversite any San Diego izay manana mpitsabo sy mpahay siansa maherin'ny 1,500 izay avoaka ny sahan'izy ireo.
Prostate, Parde, Bevohoka, sarcoma
Atidoha, rafi-pitabatabana afovoany (CNS), nono
Ankizy, Gastrointestinal, At, Prostate
Loha sy hatoka, Lymphoma, Gynecologic
Urologic, loha sy hatoka, neurologic
Sarcoma (Tsozo malefaka sy malefaka), havokavoka, Urologika
Neurologic, Head & Neck, Lymphoma
Neurologic, Gastrointestinal, ny fo
Thoracic, Breast, Neurologic (anisan'izany ny fivontosan'ny vatan'ny karandoha), ny Prostate, ny loha ary ny tenda, ny famerimberenana
Hopitaly ho an'ny ankizy
Toeram-pitsaboana Rady-Ankizy - San Diego dia toeram-pitsaboana pediatrika 551-fandriana manome loharano lehibe indrindra amin'ny serivisy fitsaboana ara-pitsaboana pediatrika feno ao San Diego, atsimon'i Riverside sy kaominaly Imperial. Rady-Children no hany hopitaly ao amin'ny faritr'i San Diego natokana ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana ara-pediatrika ary io ihany no ivon'ny trauma pediatric trauma. Rady-Children dia manolotra tolotra fitsaboana homamiadana manokana ary fitsaboana hematology amin'ny ankizy manerana ny faritra. Tamin'ny Jona 2018, Vaovao amerikana & tatitra manerantany nitana ny laharana Rady-Ankizy teo amin'ireo hopitalin'ny ankizy tsara indrindra eto amin'ny firenena amin'ny haino aman-jery 10 misy ny andiany natao tamin'ilay fanadihadiana.